Kooxaha Arsenal, Southampton,Tottenham, Crystal Palace iyo Swansea oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Newcastle United ayaa waxaa garoonkeeda St. James’ Park 1-2 uga badiyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa qeybtii hore ee ciyaarta labo gool u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Moussa Sissoko ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Kooxda Arsenal ayaa kaalina sedaxaad ka soo gashay kala horeynta horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 60-dhibcood,halka kooxda Newcastle ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 35-dhibcood.
Kooxda Southampton ayaa garoonkeeda St Mary’s Stadium 2-0 uga badisay kooxda Burnley.
Kooxda Southampton ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 37-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Shane Long,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jason Shackell ayaa daqiiqadii 58-aad ee ciyaarta goolka labaad dhaliyay kooxdiisa Burnley.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 53-dhibcood,halka kooxda Burnley ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa garoonkeda White Hart Line 4-3 uga badisay kooxda Leicester City.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa bilowgii ciyaarta labo gool oo deg deg ah u dhaliyay kooxda Tottenham.
Ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa dhamaadkii hore ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Leicester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Wes Morgan ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad ee bareejada u dhaliyay kooxda Leicester City.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Tottenham,waxana uu ahaa goolkiisii sedaxaad ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa sanadkan 29-gool ka dhaliyay horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Ciyaaryahan Jeffrey Schlupp ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka afaraad ka dhaliyay kooxdiisa Leicester City.
Ciyaaryahan David Nugent ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Leicester City.
Kooxda Tottenham ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 53-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Aston Villa ayaa waxaa garoonkeeda Villa Park 0-1 uga badiyay kooxda Swansea City.
Ciyaaryahan Bafetimbi Gomis ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto sideedaad,waxana ay leedahay 43-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 28-dhibcood.
Kooxda Stoke City ayaa waxaa garoonkeeda Britannia Stadium 1-2 uga badiyay kooxda Crystal Palace.
Kooxda Stoke City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 14-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Mame Biram Diouf.
Ciyaaryahan Glenn Murray ayaa daqiiqadii 41-aad ee ciyaarta gool bareejo ah oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Wilfried Zaha ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Crystal Palace,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 42-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 36-dhibcood.
Beelo Ku Heshiiyay Dhuusa Mareeb